Du bist hier: Startseite / Aniga oo ah (wiil,16 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad. Waxaynu isku jecelnahay...
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2018-12-21 06:05:492018-12-21 06:05:49Aniga oo ah (wiil,16 jir ah) waxaan leeyahay saaxiibad. Waxaynu isku jecelnahay si aad ah waxaana aad u jecelnahay in aynu isku soo dhowaano oona isla baashaalno. Hadda waxaynu doonaynaa in aynu inbaddan galmo isla samayno. Sideen ugu samayn karnaa sida saxda ah? Siduu ku geli karaa xubinka taranka raga gudaha xubinka taranka dumarka?